Minisitra Rakotoarimanana Gervais François Marie M. : « Ampy ho an’ny taranaka maro mifandimby ny harentsika raha tsara tantana » | NewsMada
Minisitra Rakotoarimanana Gervais François Marie M. : « Ampy ho an’ny taranaka maro mifandimby ny harentsika raha tsara tantana »
Nandritra ny fotoana fifampiarahaban’ny minisiteran’ny Fitantanam-bola sy ny tetibola ny taona vaovao 2016, ny faran’ny herinandro teo teny Andranovelona, nitondran’ny minisitra Rakotoarimanana Gervais fanazavana bebe kokoa ny fitantanam-bola sy ny tetibola. Resaka nifanaovana tamin’ny gazety Taratra.
-Gazety Taratra : Andriamatoa minisitra, amin’izao fotoana izao isika miankina betsaka amin’ny fanampiana avy any ivelany. Nilaza ny heviny momba izany rahateo ny masoivohon’i Maraoka eto amintsika, aiza ho aiza marina ny anjara birikintsika amin’ny asa fampandrosoana eto an-toerana ?
*Rakotoarimanana Gervais : Mila hoenti-manana aloha isika izao amin’ireo tetikasa maro, izany ny hisarihana hahatongavan’ireo mpampiasa vola sy mpamatsy vola. Na izany aza, miezaka isika mandray an-tanana ny fitantanana ny harem-pirenena. Zava-dehibe ny fahaiza-mitantana hampihena ny fanampiana avy any ivelany. Izany no antony nananganana ny Agence nationale de l’or, namaritana ny lalàna momba ny harena an-kibon’ny tany sy ny solika, fanatsarana ny fampidiran-ketra sy ny maro hafa. Ampy ho an’ny taranaka maro mifandimby any aoriana, raha tsara tantana ny harentsika rehetra. Noho izany, mila tsara tantana ny harentsika.
-Inona ary ny politika azonao ambara amin’izany firosoana amin’ny fanatsarana ny fitantanana izany ?
*Ezaka efa natomboka ny mampihena ny fandaniana ny vola mivoaka ato anivon’ny fanjakana. Natomboka, ohatra, ny fanadiovana ny tontolon’ny asam-panjakana tamin’ny fanaovana karatra fisotroan-dronono vaovao, nampihena 10 miliara Ar ny vola mivoaka ; nihena 9 miliara Ar ny vola nivoaka rehefa voafafa ireo mpiasa tsy ara-dalàna ; nampihena 1,5 miliara Ar ny fanadiovana ny mpiasam-panjakana ambony ; fanatsarana ny tolotrasa avy amin’ny fanjakana. Koa ezahina hatrany ny fandaniana ara-dalàna ny volam-bahoaka, ny hetra ho fanatsarana ny fiainam-bahoaka.
“Tsy nitsahatra nandoa trosa ny fanjakana”
–Malaza be trosa anatiny sy ivelany ny fanjakana, ahoana ny fiatrehan’ny fanjakana izany ?
*Mbola tsy nitsahatra nandoa trosa ny fanjakana hatramin’izay, na trosa anatiny na trosa ivelany. Misy hanaovana fanadihadiana fanaraha-maso na audit momba ireo trosa anatiny efa tany aloha, tany amin’ny taona 2004, 2005, 2006. Ao koa ny TVA izay tokony haverina amin’ireo sehatra tsy miankina. Efa nisy fifampiraharahana natao, ohatra, tamin’ny orinasa Ambatovy, araka ny fahafahana mandoa izany.
–Nampiakarina 7,5% ny karaman’ny mpiasam-panjakana, ahoana ny hevitrao momba ny an’ny mpiasa amin’ny sehatra tsy miankina, izay maro anisa indrindra ?
*Marihiko aloha fa natao hanentsina ny banga manoloana ny fiakaran’ny vidim-piainana iny. Efa zava-dehibe izay, saingy mbola tsy ampy. Ny fanjakana, tsy afaka mandidy ny sehatra tsy miankina, mahaleo tena amin’ny fitantanana any aminy. Na izany aza, eo hatrany ny fiaraha-miasan’ny fanjakana sy ny tsy miankina. Tokony hanao ezaka ny sehatra tsy miankina sasany, satria mbola ambany dia ambany ny karaman’ny mpiasa any aminy.
“Ahena ny fanampiana ny Jirama”
-Be ny fanampian’ny fanjakana ny Jirama tamin’ny taona 2015, nanatombo lavitra raha ampitahana amin’ny fanampiana ho an’ny fahasalamana sy ny fampianarana. Mbola ho toy izany koa ve amin’ity taona ity ?
*Tsy mitovy intsony, tsy maintsy ahena ny fanampiana ny Jirama ! Fanampiana avy amin’ny hetra ireny koa rariny raha tokony ho hitan’ny vahoaka ny tambiny amin’ny fampiasana azy. Tsy ny Jirama ihany, fa hanaovana fanaraha-maso ireo orinasam-panjakana rehetra, hanarenana ny lesoka mba tsy ho vesatra ho an’ny fanjakana.
-Ahoana kosa ny momba ny lalana eto Antananarivo renivohitra Andriamatoa minisitra ?
* Efa nifampiresaka izahay sy ny minisitry ny Asa vaventy talohan’ny faran’ny taona. Efa misy tetibola atokana ho an’izany, ny ampahany 20 % avy amin’ny Fer. Tokony hahitam-piovana izany afaka 15 andro.